अाज अामाको मुख हेर्ने दिन
काठमाडौं । वैशाख कृष्ण औँसीका दिन मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व जन्म दिने आमालाई मीठामीठा परिकार खान तथा राम्रा कपडा लगाउन दिएर खुशी पारी सोमबार मनाइँदैछ ।
यस वर्षको आमाको मुख हेर्ने औँसी सोमबार परेको छ । सोमबारे औँसीमा बिहान उठेर नबोली स्नान गरेमा यो लोकमा सुख शान्ति र परलोकमा सद्गति पाइने धर्मशास्त्रका ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
मातातीर्थको उत्पत्तिका सम्बन्धमा प्रचलित एउटा कथा यस्तो छ । कथा अनुसार धेरै वर्ष पहिले त्यस ठाउँमा गाईबस्तु चराउने चौर थियो । एक दिन एउटा गोठालाले सो चौरमा फ्याँकेको रोटीको टुक्रा हरायो ।
उसले अचम्म मानी रोटीको अर्काे टुक्रा पनि फ्याँक्यो, त्यो पनि हरायो । अरू गोठालाहरूले पनि रोटीका टुक्रा फ्याँके, तिनमध्ये आमा जीवित हुनेले फ्याँकेको रोटी त्यहीँ रही आमा नहुनेले फ्याँकेका रोटीमात्र अलप भए ।
कथाअनुसार पहिलोचोटी रोटी फ्याँक्नेकी आमा पनि थिइनन् । त्यो दिन वैशाख कृष्णपक्षको औँसी थियो । दोस्रो दिन भने अघिल्लो दिनको जस्तो रोटी हराएन ।
सो कुरा चाल पाई गाउँलेहरूले औँसीका दिन मृत आमा त्यस ठाउँमा आई आफ्ना छोराछोरीले दिएको चिज खाँदा रहेछन् भन्ने विश्वास गरेर त्यस ठाउँमा कुण्ड बनाइ त्यसको नाम मातातीर्थ राखे ।
मन्दिरको प्रसाद खाँदा ११ को मृत्यु, ७० जना अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । भारतको कर्नाटकमा मन्दिरको प्रसाद खाँदा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब ७० जना बिरामी परेका छन् । कर्नाटकको चामराजनगर जिल्लास्थित सुलाबाडी गाउँको किच्चुकुट्टी मारम्मा मन्दिरको प्रसाद…
नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना छ : शृङखला खतिवडा
काठमाडौं । मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताको टप १२ सम्म पुग्न सफल नेपाली सुन्दरी शृङ्खला खतिवडाले आफू नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना रहेको बताएकी छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै…
छुरा प्रहार गरी छोराले गरे आफ्नै बाबुको हत्या
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका १७ मा छुरा प्रहार गरी छोराले आफ्नै बाबुको हत्या गरेका छन् । उनले घरायसी विवादमा आफ्नै बाबुको हत्या गरेको बताइएको छ । विराटनगर– १७ का…
दूग्ध पदार्थमा स्वच्छता र गुणस्तर निर्देशिका : पानी मिसाए १० हजार जरिवाना
काठमाडौं । सरकारले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा स्वच्छता कायम गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका जारी…